RANDRIANASOLO Jacques nitsidika ny fonjan'i Tsiafahy, mbola betsaka ny tsy voatsara - TVM du 28 Février 2019 - Survivre à Madagascar dans le milieu des infrastructures télécom et réseaux CISCO
Accueil Antanimora RANDRIANASOLO Jacques nitsidika ny fonjan’i Tsiafahy, mbola betsaka ny tsy voatsara –...
Nisy fitsidihana tampotampoka nataon’ny Minisitry ny fitsarana teny amin’ny fonjan’ny Tsiafaha nanaraha-maso ny zon’ireo voafonja, indrindra ihany koa ny fomba fiasan’ireo mpandraharahan’ny fonja amin’ity fonja ity. Solange Rakotoarinosy, Todoson François.
Mba ahafantarana ny tena zava-misy marina mikasika ny fiainan’ny voafonja eto Tsiafaha no antony izao fitsidihana tampoka nataon’ny Minisitry ny Fitsarana teto izao. Nisy ny fisavana entana voarara satria tsy azon’ny voafonja atao ny mitondra finday sy zava-maranitra ato.
Tsy famonoana olona ny fonja, ary izay no tena hijereko anareo teto hoe mijaly ve nareo sa tsy mijaly? Ny fonja tsy famonoana olona fa fitaizana, fanitsiana, asa azonareo? Dia rehefa mba mivoaka ato izany, mba olom-baovao, olona mbola afaka miaraka mipetraka amin’ny fiaraha-monina. Fa tsy hoe olon-dratsy dia olon-dratsy foana mandrakizay. Ny tarehy no tsy azo ovana fa ny toetra azo ovana. Ka eviter-na autant que possible mba tsy hamerina izany intsony farafarany. Efa nahitsy taty dia mba mipetraka tsara; mazava!!
Mailo ny fanjakana satria efa nisy ny fonja vaky toy ny tany Tsiroanomandidy.
Nosavana daholo ny entan’ireo iray chambre tamin’ireo, tsy nahitana telephone. Ratsy mantsy ny telephone, mety hoe afaka mi-commande olona any ivelany manao zavatra na manao zavatra ohatr’izany, dia tena maha-sarotiny izany. Ianao gadra izany aty dia tokony tsy hanana communication any ivelany izany. Adidinay ihany koa ny mijery ny aty hoe mihinan-kanina ve ireo, mijaly ve ireo, dia ngamba henonao teo ny valin’izy ireo fa dia « bien traiter » ry zareo, misakafo ry zareo, ary na ny ao anatin’ny trano aza dia hitako mba milamina ihany ilay izy. Nijery izany izahay, nanontany ihany koa moa satria hoe iza no voatsara, iza no tsy voatsara mba ahitana izay tokony atao aty amin’ny vonjaben’ny Tsiafaha. Mbola misy maromaro ihany no tsy voatsara ka ezahana moa hiteny ny tompon’andraikitra mba hanabe ny enrôlement ato amin’ireo dossiers criminelles mbola maromaro tsy voatsara ireo
Miiisa 1083 ireo voafonja voatazona eto Tsiafaha. Filan’ny mpiasa manolona izany ny fanorenana trano fonenena eto satria dia tongotra 6km isan’andro hoy izy ireo no tsy maintsy vitaina raha hamonjy toeram-piasana ety amin’ny fonjan’ny Tsiafaha.
Article précédentTorture et viol, deux gendarmes incarcérés – Expressmada du 28 février 2019
Article suivantFivarotana ny zaridainan’i Antaninarenina – Efa any amin’i Bianco ny dossier – TVM du 28 février 2019